နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ File ကိုဘယ်လို - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော - Lawyers in Nigeria.
နိုင်ဂျီးရီးယားမှာမူပိုင်ခွင့် APPLICATION သို့ဖိုင်ပုံ
အဆိုပါ Lex Artifex ဥပဒေရုံးကသူတို့ Intellectual Property ကာကွယ်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုဖို့ IP ကို ​​Helpdesk မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် (အိုင်ပီ) နှင့်၎င်းတို့၏ Intellectual Property ခငြ့်အရေးပြဋ္ဌာန်း (IPR) နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာသည့်အခါ. ဒါကထုတ်ဝေနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ file ကိုဘယ်လိုတစ်လျှပ်တစ်ပြက်ပေးသည်.
တစ်ဦးကမူပိုင်ခွင့်အနေနဲ့တီထွင်မှုကာကွယ်တရားဝင်မှန်သည်, အရာပြဿနာတစ်ခုအားအသစ်နှင့်တီထွင်နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်. မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်စီးပွားဖြစ်အဆိုပါ protected တီထွင်မှုအမြတ်ထုတ်ရာမှအခြားသူများအားရပ်တန့်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, အောင်အားဖြင့်ဥပမာ, သုံးပြီး, ကတင်သွင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချနေ, အဆိုပါမူပိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အတွက်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒေသအတွက်.
ဒါကြောင့်အသစ်ဖြစ်၏လျှင်တစ်ဦးတီထွင်မှုမူပိုင်ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ရလဒ်များကိုတစ်ခုတီထွင်လှုပ်ရှားမှုကနေနှင့်စက်မှုလျှောက်လွှာနိုင်စွမ်း; သို့မဟုတ်, ကမူပိုင်တီထွင်မှုအပေါ်မှာတိုးတက်မှုပါဝငျနှင့်လည်းအသစ်ဖြစ်၏, တီထွင်လှုပ်ရှားမှုကနေရလဒ်တွေကိုနှင့်စက်မှုလျှောက်လွှာနိုင်စွမ်း.
မူပိုင်ခွင့်လုပ်နိုင်မရ, သို့သော်, စက်ရုံသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်အမျိုးပေါင်း၏လေးစားမှုသို့မဟုတ်အပင်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်များအတွက်ရရှိသောခံရ (အဏုဇီဝဗေဒဖြစ်စဉ်များနှင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များ မှလွဲ.); အများပြည်သူအမိန့်သို့မဟုတ်ကငျြ့တရားနှငျ့ဆနျ့ကငျြပါလိမ့်မယ်အရာ၏တီထွင်မှုထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်ခေါင်းပုံဖြတ်; အခြေခံမူများနှင့်တစ်ဦးသိပ္ပံနည်းကျသဘောသဘာဝရှာဖွေတွေ့ရှိသို့မဟုတ်.
၏မူပိုင်ခွင့်များနှင့် Designs အက်ဥပဒေ 1971 နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်နှင့်ပြဋ္ဌာန်းအုပ်ချုပ်မူလတန်းဥပဒေပြဌာန်းဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါမူပိုင်ခွင့်စည်းကမ်းများအဆိုပါမူပိုင်ခွင့် Registry ကိုမှာမွေးစားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုထိန်းညှိ.
တစ်ဦးကမူပိုင်ခွင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်တန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါသည်, ကော်ပိုရေးရှင်း, သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဖြင့်.
2. တစ်ဦးကသတ်မှတ်ချက်, ထပ်၌သင်တို့၏ပြောဆိုချက်ကိုသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများအပါအဝင်;
3. အဆိုပါအစီအစဉ်များနှင့်ရေးဆွဲ, ရှိလျှင်, ပုံတူအတွက်;
6. သငျသညျနိုင်ဂျီးရီးယားအပြင်ဘက်တွင်တစ်တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်အစောပိုင်းကလျှောက်လွှာများ၏လေးစားမှုအတွက်နိုင်ငံခြားဦးစားပေးအပေါ်မူတည်ပြီးလိုပါက, သင်၏လျှောက်လွှာအောက်ပါဖေါ်ပြခြင်းရေးသားထားသောကြေငြာအတူလိုက်ပါရန်ရှိသည်မယ်လို့:
သငျသညျကတဆင့်နိုင်ဂျီးရီးယားမူပိုင်ခွင့်ရုံးသို့မှာမူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ file ရန်ရှိသည်မယ်လို့ နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အသိအမှတ်ပြုမူပိုင်ရှေ့နေ – သင့်ရဲ့အဖွစျဆောငျရှကျမယျ့သူ “စံချိန်တင်အပေါ်ရှေ့နေချုပ်” နှင့်အေးဂျင့်.
သငျသညျတခုကနိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့် file လိုပါက, တစ်ဦးဟာတီထွင်မှုများ၏မူပိုင်၏ကနဦးအကဲဖြတ်မှတ်ပုံတင်ခံရဖို့ဆည်းကပ်ဘို့နိုင်ငံတကာရှာရန်လိုအပ်. ဒါကနိုင်ငံတကာရှာရန်အစီရင်ခံစာ၏ထုတ်ဝေမှုနှင့်အတူနောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်.
နိုင်ငံတကာရှာရန်အစီရင်ခံစာ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည် 18 လျှောက်လွှာများကိုဦးစားနေ့မှလအတွင်း (တနည်း, ဖိုင်ကိုနေ့စွဲသို့မဟုတ်ပါကဦးစားပေးမလုပ်ပဲရာမှတစ်ဦးအစောပိုင်းကလျှောက်လွှာများ၏ပုံစံတင်ပို့ရန်နေ့စွဲ, သက်ဆိုင်လျှင်).
နိုင်ဂျီးရီးယား WIPO ၏မူပိုင်ခွင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ်တစ်ခုလက်မှတ်ရေးထိုးသည်နှင့်ရာခိုင်နှုန်းအလုပ်ထုတ်ကုန်တိုက်ရိုက် access ကိုရှိပါတယ်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှာရန်အစီရင်ခံစာအပါအဝင်, နိုင်ငံတကာရှာဖွေခြင်းအာဏာပိုင်များနှင့်တစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြိုစာမေးပွဲအစီရင်ခံစာများများ၏ရေးသားထင်မြင်ချက်.
အဆိုပါရာခိုင်နှုန်းသည့်စနစ်အောက်တွင်အားလုံးကြိုတင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူပိုင် FILE နယ်မြေမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်ဘက်တော်သားတို့အတွက်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်လက်ခံ.
သင်ရာခိုင်နှုန်းသည့်စနစ်အောက်တွင်တင်သွင်းသို့မဟုတ်နိုင်ဂျီးရီးယားအပြင်ဘက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်တင်သွင်းထားတဲ့အစောပိုင်းကမူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာများနှင့်စပ်လျဉ်းတဲ့နိုင်ငံခြားကိုဦးစားပေးကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေးသော်လည်းချင်ဘယ်မှာ, အဆိုပါနိုင်ဂျီးရီးယားအိုင်ပီရုံးအစောပိုင်းကလျှောက်လွှာများ၏ရက်စွဲနှင့်အရေအတွက်ကိုဖေါ်ပြခြင်းရေးသားထားသောကြေငြာတောင်းမည်, အစောပိုင်းပလီကေးရှင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောအတွက်တိုင်းပြည်, သင်၏နာမ.
ဒါဟာကနဦးတိုင်းပြည်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖန်ဆင်းကတည်းကမပိုသုံးထက်လအတွင်းကြာသင့်ကြောင်းတစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်. သင့်အနေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်ရုံးသို့အားဖြင့်အစောပိုင်းကလျှောက်လွှာတစ်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းမိတ္တူပေးရပါလိမ့်မယ် (သို့မဟုတ်ယင်း၏ညီမျှသော) အစောပိုင်းလျှောက်လွှာတင်သွင်းရာနိုင်ငံတွင်းရှိ.
တစ်ဦးကရာခိုင်နှုန်း application ကိုတစ်ဦးပထမဦးဆုံးဖိုင်အဖြစ်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်တင်သွင်းစေခြင်းငှါသို့မဟုတ်, တစ်နည်းအားဖြင့်, အဲဒါကိုမှတက်တင်သွင်းသင့်လျော်တဲ့လျှောက်လွှာကနေဦးစားပေးတောင်းဆိုစေခြင်းငှါ3ရှေ့မလကြာ, ကအစောပိုင်းကလျှောက်လွှာကဲ့သို့တူညီသောနေ့စွဲအပေါ်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရလျှင်အဖြစ်ရာခိုင်နှုန်း application ကိုကုသခြင်းကိုခံရလတံ့သောအမှု၌.
တစ်ဦးတီထွင်မှုများ၏လေးစားမှုအတွက်မူပိုင်ခွင့်ကို "ဟုတ်မှန်ပိုင်ရှင်" ထဲမှာမအပ်နှင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အတွက် "ပြဌာန်းချက်တီထွင်သူ", မူပိုင်ခွင့်များအတွက်လျှောက်လွှာ file မှပထမဦးဆုံးသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည့်အမှု၌, သို့မဟုတ် validly အဆိုပါတီထွင်မှုများ၏လေးစားမှုအတွက်တင်သွင်းမယ့်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ၏နိုင်ငံခြားငွေဦးစားပေးဆိုမှုချနိုင်သူကို.
အဆိုပါ WIPO အုပ်ချုပ်ခွင့်မူပိုင်ခွင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ် (ရာခိုင်နှုန်း) ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ပုံစံတင်ပို့ရန်နှင့် ပတ်သက်. ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်စာချုပ်ဖြစ်ပါသည်, ရှာဖွေနေနှင့်မူပိုင်ခွင့် applications များနှင့်တကွပါရှိသောနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ဖြန့်ဝေ၏စာမေးပွဲ. အဆိုပါရာခိုင်နှုန်းမျိုးစုံနိုင်ငံများတွင်ပိုပြီးအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေမူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရှာကြံလျှောက်ထားကမ်းလှမ်း, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှင့်အကျိုးရှိစွာ option ကို. တဦးတည်းဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့် "နိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ” တဦးတည်းမူပိုင်ရုံးနှင့်အတူရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာ (က "ရုံးကိုလက်ခံရရှိ").
The Nigerian IP Office grants patents which have the same effect as though the applications were filed in the WIPO Member states since Nigeria isasignatory to the Patent Cooperation Treaty. သို့သျောလညျး, အဆိုပါရာခိုင်နှုန်း၏ထောက်ပံ့ငွေဘို့မပေးပါဘူး “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်” မူပိုင်ခွင့်ပေးအပ်များအတွက်တာဝန် applications များလုပ်ကြသည်ရှိရာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်မူပိုင်ခွင့်ရုံးများ၏ဖြစ်သကဲ့သို့.
မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့, အဆိုပါမူပိုင်ခွင့်များအတွက်တရားဝင်သည် 20 နှစ်ပေါင်း နှင့်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးပေးရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်.
Lex Artifex LLP မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာပြင်ဆင်မှုများနှင့်တရားစွဲဆိုမှုန်ဆောင်မှုများအပြည့်အဝအကွာအဝေးကမ်းလှမ်း. ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ IP ကိုရှေ့နေများပါဝင်သည် & နိုင်ဂျီးရီးယား IP ကိုရုံးကအသိအမှတ်ပြုရှေ့ရပျ.
နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်ခွင့်များဖိုင်, ကျနော်တို့ကတီထွင်မှုနှင့်ရှေ့နေချုပ်ရဲ့ Power များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်.
ငွေတောင်းခံအစီအစဉျကို, ကျေးဇူးပြုပြီး click here: နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်၏ကုန်ကျစရိတ်.
Lex ARTIFEX မူပိုင် SERVICES မျက်နှာဖုံး:
မူပိုင်ခွင့် applications များ၏ပြင်ဆင်မှု
WIPO နှင့်အတူဒါမှမဟုတ်နိုင်ဂျီးရီးယားအိုင်ပီရုံးမှာ FILE
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု-အာရုံစူးစိုက် IPR အကြံဉာဏ်, တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် lexartifexllp@lexartifexllp.com. The language translation provided in this publication is provided for convenience purposes only.